Amasiko aseMzantsi Korea | Iindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | South Korea, isiko
Ixesha elithile ngoku, mhlawumbi ishumi leminyaka ngoku, South Korea kukwimephu yehlabathi yenkcubeko edumileyo. Ngoba? Kwindlela yakhe yomculo, odumileyo K-pop, Kunye nemidlalo yabo yesepha okanye uthotho lukamabonakude olubizwa njalo Idorama zaseKorea. Zombini zithathe umhlaba kwaye zinabalandeli abathembekileyo kuyo yonke indawo.
Kwakudala ngaphambi kokuba iihlaya zaseJapan kunye noopopayi basenze sajonga eJapan nakwinkcubeko yayo, namhlanje ilizwe laseAsia eligxile kuthi nguMzantsi Korea. Abantu abaninzi baqale ukufunda isiKorea, balandela inkqubela phambili yeenkwenkwezi ze-pop okanye badla uthotho ngokulandelelana emva kokuba zivelisiwe phantse kumabonwakude iFordism yokulawula imarike. Enjani yona impumelelo! Ke ngoko, masibone apha ezinye zeefayile ze- Amasiko aseMzantsi Korea:
Kwincam esemazantsi peninsula yaseKorea bahlala phantse 51 yezigidi zabantu Abasahlulwa kubazalwana babo basemantla ukusukela kwimfazwe yaseKorea phaya kwiminyaka yoo-50. Ngokusesikweni basesemfazweni, bekukho kuphela ukupheliswa komlilo, kodwa iinyani zala mazwe mabini azinakuba ngokuchaseneyo ngakumbi kuba emazantsi ulwandle loongxowankulu ngelixa emantla bengamaKomanisi. Elinye lawona mazwe ambalwa obukomanisi ashiyekileyo emhlabeni.
Ngokusisiseko kufuneka wazi ukuba i-nucleus yoluntu apha lusapho, leyo Kuqhelekile ukutshata okwangoku, eyi uluntu lwamehlo kwaye phakathi kwabantwana indoda ihlala iphumelela ngaphezu komfazi. Inqanaba lemfundo libaluleke kakhulu kwaye njengaseJapan, ulwimi lwaseKorea ngokwalo luphawula umohluko ngokwasentlalweni.
Indawo yabasetyhini, nangona ikhulile ngokuhamba kweminyaka, ayifikeleli kumanqanaba alinganayo nangayiphi na indlela. Kuyinyani ukuba phantse isiqingatha sabo siyasebenza kodwa yi-2% kuphela ehlala kwizikhundla zamandla.
Ngale nto ithethwayo, makhe sijonge ezinye ze Amasiko aseKorea ekufuneka siwazi ngaphambi kokuhamba.
la imbeko Yindlela yesiko yokubulisa.
Xa uzazisa, uqala ubize igama losapho, oko kukuthi, ifani. Kwakhona kuqhelekile ukubizana ngefani kwaye hayi ngegama, njengoko kwenzekayo eNtshona kwiminyaka engama-60 eyadlulayo. Kwaye ukuba unesidanga, igqwetha, ugqirha okanye nantoni na, kuqhelekile ukuyifaka.
Ukuba uza kubamba izandla xa ubulisa, ungaze ube sisandla esinye. Isandla sasimahla kufuneka siphumle kwelinye. Ukuba ungumfazi ungabaleka ugobe nje. Kwaye kufanelekile ukuba ubulise xa usitsho.
njengamaJapan, amaKorea Bacaphukela ukuthi hayi. Kunzima kubo ke ngoko bajikeleza amawaka aliwaka kwaye yiyo loo nto iintetho okanye iingxoxo zihlala ixesha elide. Abayiyo nayiphi na into ngaphandle kwabantu ngqo.
amaKorea ayilulo ulwimi lomzimba ke umntu kufuneka ayeke ukuveza okuninzi ngomzimba. Siyangana, siphathe, sithinte kakhulu kwaye baziva benomsindo okanye boyikisile. Kubaluleke kakhulu ukubanika indawo yakho.
Abayi kuxolisa ukuba ungqubana nabo esitratweni ukuze ungaziva ukhubekile, ayisiyomntu, ngakumbi kwizixeko ezikhulu.
ukuba uyabona amadoda ehamba ngengalo okanye amantombazana anjalo xa ewonke, ayikuko ukuba athandana namanye okanye athandana namanye, yinto eqhelekileyo.
amaKorea ukutshintshiselana ngezipho, nkqu nemali. Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokufumana enye khumbula ukuyisebenzisa izandla zozibini ukuyithatha kwaye ungayivuli de ahambe umntu okunike yona. Kukurwada ukwenza njalo bekho.
Ukuba uza kunika isipho, ungakhethi amaphepha amnyama okanye abomvu, kuba ayingombala mhle. Yiya ngemibala eqaqambileyo. Kuya kufuneka uze nesipho ngakumbi ukuba umenyiwe endlwini kodwa ukuba kweli cala lehlabathi sihlala sizisa iwayini zikhona isitayile iilekese, iitshokholethi okanye iintyatyambo. Akukho tywala, nangona benxila inika inkampu. Ewe, isipho akufuneki sibize kuba kungenjalo uya kusinyanzela isipho esinexabiso elilinganayo.
kufuneka khulula izihlangu xa ungena endlwini waseKorea.
Ukulibaziseka okuphezulu okuvunyelwe ngaphandle kokubonwa njengento embi sisiqingatha seyure. Ngapha koko, ukuba ukhona ukufika ngexesha ngcono.
ukuba ulundwendwe akufuneki uzincede ekutyeni nasekuseleni. Umbuki zindwendwe wakho uya kukwenzela yona.
Oku ngokubhekisele kwiintlanganiso zentlalo. Ukuba ngumkhenkethi oqhelekileyo akunakuba nazo iimeko ezinje kodwa ukuba uya kufunda okanye emsebenzini uya kuzifumana. Ngaphezu koko, ufuna ukuwafumana kuba ngaloo ndlela unokufumana amava okwenyani aseKorea.
Nokuba ngumzuzwana. Kodwa uthini nge Amasiko aseKorea xa kufikwa kumba wokutya nokusela? Ukutya kubalulekile ngamaxesha obomi baseKorea kwaye kunceda ukwakha ubudlelwane bezentlalo.
khumbula hlala phantsi emva kwalomntu ukumemileyo. Ukuba lo mntu unyanzelisa ukuba uhlale endaweni enye, yenze njalo, nangona unokumelana nokuziphatha kuba ngokuqinisekileyo iya kuba sesona sihlalo sihle.
ukuba loo mntu umdala, into elungileyo ekufuneka yenziwe kukuzikhonza kuqala.
njengaseJapan, sukuzikhonza kuqala. Into ethobekileyo yokwenza kukunceda abanye kuqala. Ukuba ungumfazi, kuqhelekile ukuba abantu basetyhini bakhonze amadoda kodwa bangathandani (hayi indlela yamehlo!)
Ukuba awufuni kusela ngakumbi, shiya isiselo kwiglasi kwaye yiyo loo nto. Hlala ungenanto, umntu uza kuyigcwalisa.
Kuqhelekile ukuba kwimizuzu embalwa elungileyo bazinikela ekutyeni, bengathethi. Ayisiyongxaki. Ngamanye amaxesha incoko iqala xa wonke umntu esitya kancinci.
ukutya nesiselo kuyadluliselwa kwaye kwamkelwe ngezandla zozibini.
AmaKorea kufuneka abambelele kwimivalo nje ukuba isidlo siphelile, kwaye njengondwendwe olulungileyo, awufanelekanga ukuyala imbono.
AmaKorea asela ibhiya eninzi kodwa isiselo sikazwelonke ngokugqwesa isoya, isiselo esimhlophe esifana nevodka, nangona sithambile, phakathi kwe-18 kunye ne-25% yotywala.
Sele siyazi into emasiyenze kwaye singayenzi kwindibano yokuhlangana, kodwa ziziphi izinto ezingavumelekanga kumasiko aseKorea? Ewe, yalatha:
kunganxitywa zizihlangu ezindlwini nasetempileni.
akukho nto yokusela nokutya kwiindawo zikawonke-wonke ngelixa uhamba.
Awuvumelekanga ukuba ubeke iinyawo zakho kwifenitshala, nokuba awunazihlangu.
Ukuba uza kubhala into akufuneki usebenzise i-inki ebomvu kuba luphawu lokufa, ke ukuba ubhala igama lomntu ngaphezulu kwayo, banqwenela ukufa uqobo.
inani lesine linamathamsanqa.
Ngoku ewe, ngethamsanqa kuhambo lwakho oluya eMzantsi Korea!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » isiko » Amasiko aseMzantsi Korea